बिजनेसमा १ करोडभन्दा बढी घाटाभएपछि, श्रीमती दुई नाबालक छोरासहित त्रिशूली नदीमा हामफाले बिनय ! « Etajakhabar
बिजनेसमा १ करोडभन्दा बढी घाटाभएपछि, श्रीमती दुई नाबालक छोरासहित त्रिशूली नदीमा हामफाले बिनय !
प्रकाशित मिति : ३ माघ २०७६, शुक्रबार १४:२३
काठमाडौँ ।धादिङको बेनीघाटस्थित झोलुङ्गे पुलबाट एक दम्पती दुई छोरासहित त्रिशूली नदीमा हा’म’फालेका छन् । हामफाल्नेमा चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नम्बर ५ स्थित थानकोट घर भएका विनय लामिछाने र उनकी श्रीमती दुई नाबालक छोरासहित त्रिशूली नदीमा हामफालेका हुन् । बिहीबार साँझ ६ बजेतिर यो दम्पतीले दुई नाबालक छोरासहित त्रिशूली नदीमा हा’मफा’लेका हुन् ।
त्रिशूली पुलबाट नदीमा हामफालेका मध्य बिनयलाई जिवितै उद्दार गर्न सकिए पनि श्रीमतीको भने मृ८त्यु भइसकेको प्रहरीले जनाएको छ । २ वर्ष र ६ महिनाका दुई नाकाबलक छोराहरु भने बेपत्ता भएको बताइएको छ । उनीहरुको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
उनीहरु किन एकसाथ नदीबाट हामफाले भन्नेबारे खुल्न नसकेको बताइएको छ ।अनुसन्धान अनुसार विनय परिवारसहित आदमघाटस्थित ससुराली जान भनेर काठमाडौँबाट २ बजे हिँडेपनि गोरखाको घ्याल्चोक पुगेको अनुसन्धानले देखाएको छ ।
घ्याल्चोक पुगेर बाटोमा ससुराली घर जाने भन्दै उनीहरु गाडी गुड्ने पक्की पुलबाट नआएर बाँदरेस्थित झोलुङ्गे पुलबाट फर्कंदै गरेको बताइएको छ । कमोडिटी अनलाइन बिजिनेसमा १ करोडभन्दा बढी घाटामा गएका कारण पनि विनयले यस्तो कदम चालेको हुन सक्ने बताइएको छ ।